High-Tayada toosan budada buux warshad mashiinka iyo saarayaasha | Brightwin
mashiinka lagu cabayn kartoonka
mashiinka buuxinta budada toosan
The mashiinka buuxinta budada toosan ku dhameysan kartaa cabbiridda, buuxinta, iwm
mashiinka Tani waxay ansixiyeen filler Auger iyo laba nooc oo motor Howlsocodsiinta si loo xakameeyo lacagta buuxinta saxsanaan sare. Mashiinka waxaa la sameeyey bir 304 oo 316L ahama qayb taabto wax soo saarka.
Isticmaal dareen sare dheelitirka electronic hoos dhalada markuu ka dheregtaan, garasho jeeg double miisaankiisu (auger iyo dheelitirka electronic), ay ka badan ayaa sax ah.
-celin Macaamiisha '
Mashiinka dhameysan kartaa cabbiridda, buuxinta, iwm Sababtoo ah design asalka ah, waxaa sii haboon xirxiraan wax budada ah in si sahlan waa in ay socdaan Wabiyaalkii, sida daroogada xoolaha, budada caanaha, ciidda carbon, bootar, nuxurka iwm
mashiinka Tani waxay ansixiyeen Auger filler iyo laba nooc oo motor Howlsocodsiinta si loo xakameeyo lacagta buuxinta saxsanaan sare. Waxaa haboon buuxintii oo ah budada galay bacaha pre-dhigay iyo dhalooyin ama weelasha kale. Mashiinka waxaa la sameeyey bir 304 oo 316L ahama qayb taabto wax soo saarka.
1. Howlsocodsiinta motor oo aad u adeegtaan darawalka si auger gacanta, oo ay deggan la saxda sare.
2. gacanta PLC, taabashada dislay aadanaha-computer screen, fududahay in la shaqeeyaan.
3. Iyada oo qalabka nadiifinta ciidda.
4. wheel gacanta ansixiyeen si ay ula qabsadaan height buux madaxa, fududahay in la beddelo tirada dhalada kala duwan.
5. toosan nooca siman, cover aagga yar, ay fududahay in la maydhaa.
6. go'an dhismeedka auger, oo aan wasakhda biraha.
7. Isticmaal dareen sare dheelitirka electronic hoos dhalada markuu ka dheregtaan, garasho jeeg double miisaankiisu (auger iyo dheelitirka electronic), ay ka badan ayaa sax ah.
8. wax yaalaha laba xadhig laba madaxdii in la kordhiyo xawaaraha.
Power sahayda: 380V / 50HZ (laga beddeli karaa)
Total xoogga, 1.6KW
Capacity: 10-80b / min
sax Buuxinta: ≤0.5%
aragti: 2000 × 970 × 2030mm (L & W & H)
Previous: mashiinka Calaamadinta
Automatic Powder Buuxinta Machine
Powder Machine Buuxinta Dhalo
Buuxinta Powder Machine Small
Salt Powder Buuxinta Machine
Buuxinta Small Powder Machine
Small buux budada dhalada iyo mashiinka ku furtay
Fuliyaan shirkad 1003, No. 1399, Jinqiao Rd, Shanghai China
fuud Cube Machine , Fuud Cube laalaab Machine, Filling Machine,沪ICP备18018895号-1